Toy izany koa ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus | Androidsis
Na dia tsy tsiambaratelo intsony aza izany satria hanana tondra-drano marobe izahay ary, raha ny marina, ny TENAA fanamarinana nanome antsipiriany marobe taminay, ny orinasa sinoa Huawei dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny findainy vaovao Nova 2 sy Nova 2 Plus tamin'ny hetsika izay natao tany amin'ny firenena nahaterahany, any Shina.
Ny herinandro lasa teo dia efa nanamafy i Huawei fa hivoaka tsy ho ela ny finday avo lenta vaovao ary, izany tokoa. Raha te hahalala ianao ny antsipiriany rehetra momba ny Nova 2 sy Nova 2 Plus vaovao, aza adino izay manaraka.
1 Ny Huawei Nova 2 vaovao: selfie amin'ny 20 MP sy fakan-tsary roa
1.1 Ity no Huawei Nova 2
Ny Huawei Nova 2 vaovao: selfie amin'ny 20 MP sy fakan-tsary roa
Ny Huawei Nova 2 vaovao sy ny Nova 2 Plus dia miteraka fivoarana na kinova nohatsak'ireo modely an'ny zana-tariby teo aloha sy voalohany amin'ity andiana smartphone natomboka tamin'ny 2016 ity.
Ireo terminal vaovao dia tonga miaraka amin'ny a vatana vy iray na unibody sy ny pitsopitsony teknikan'izy ireo amin'izy samy izy dia azo ampitahaina, ny haben'ny efijery na ny fahaizan'ny bateria, ny tsy fitovizany lehibe indrindra; ny toetra roa, araka ny azonao an-tsaina, dia lehibe kokoa amin'ny maodely Plus.
Ny taranaka voalohany an'ny Huawei Nova dia nandiso fanantenana tamin'ny lafiny sary sy horonan-tsary. Ny orinasa, mahafantatra izany, dia nifantoka tamin'ny ampahany betsaka tamin'ny ezaka nataony tamin'ny fanatsarana ny toetra mifandraika amin'ity fizarana ity amin'ireo mpandimby azy ary izany no nampidirany ny Fakan-tsary roa misy fakan-tsary 12 MP sy 8 MP roa, ary fakan-tsary 20 MP eo alohan'ireo fitaovana roa ireo. Amin'izany fomba izany, ny fitaovana roa, miaraka amin'ny ambiny mampiavaka azy, dia eo amin'ny toerana tena tsara raha ny momba ny sary.
Ity no Huawei Nova 2
Manomboka amin'ny maodely kely indrindra isika, ny Huawei Nova 2, izay misy a Fampisehoana HD feno dimy hakiho miaraka amin'ny 1920 x 1080p vahaolana ary a Kirin 659 processeur valo fotony miaraka amin'ny RAM 4 GB sy fitehirizana 64 GB anatiny izay ahafahan'ny mpampiasa manitatra amin'ny alàlan'ny karatra microSD hatramin'ny 128 GB.
Mikasika ny fizakan-tenany, ny Nova 2 dia manolotra a Bateria 2.950 mAh, ankoatry ny Bluetooth 4.2, sensor sensor, ny fakantsary voalaza etsy ambony ary, amin'ny maha rafitra miasa azy, dia miaraka aminy Android 7.0 Nougat eo ambanin'ny interface sonia, EMUI 5.1. Ho hitanao ny ambiny amin'ny antsipiriany ao amin'ny latabatra famintinana avelako eo ambanin'ity sary manaraka ity ianao.
modely Nova 2
Operating System Android Nougat 7.0 ambanin'ny EMUI 5.1 interface tsara
efijery 5.0 "Full-HD miaraka amina vahaolana 1920 x 1080 teboka) LTPS 2.5D
processeur Kirin 659 octa-core (4 x A53 amin'ny 2.36GHz + 4 x A53 amin'ny 1.7GHz)
Tahiry anatiny 64 GB miaraka amin'ny fanohanan'ny karatra fahatsiarovana microSD hatramin'ny 128 GB
Fakan-tsary aoriana Dual 12 MP - PFAF - 1.25μm pixel habe - aperture f / 1.8 + 8 MP - miaraka amin'ny flash LED
Fakan-tsary aloha MP 20
Conectividad 4G LTE - Wi-Fi 802.11 b / g / n - Bluetooth 4.2 - GPS / GLONASS - USB Type-C
Fitaovana hafa sensor sensor- Dual SIM (nano + nano / microSD) - Feo manodidina an'i 3D misy puce AK4376A - mpampitohy jack 3.5mm headphone
lafiny X X 142.2 68.9 6.9 MG
vidiny $ 365 ca.
Raha efa nandroso isika, ny maodely Nova 2 Plus dia mitovy amin'ny maodely Nova 2, afa-tsy ny antsipiriany sasany toy ny haben'ny efijery na ny bateriamankany Azonao atao ny mandinika ny masontsivana rehetra ao amin'ity tabilao manaraka ity:
modely Nova 2 Plus
efijery 5.5 "Full-HD miaraka amina vahaolana 1920 x 1080 teboka LTPS 2.5D
Tahiry anatiny 128 GB miaraka amin'ny fanohanan'ny karatra fahatsiarovana microSD hatramin'ny 128 GB
Fitaovana hafa sensor sensor- finger SIM (nano + nano / microSD) - puce feo AK4376A - jack headphone 3.5mm
lafiny 153.9 x 74.9 x 6.9 mm
vidiny $ 423 ca.
Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus dia ho hita ao amin'ny manga, maitso, volamena, volamena mainty sy raozy, vidiny amin'ny 2499 yuan (365 $ eo ho eo) ho an'ny Nova 2 sy 2899 yuan (eo amin'ny $ 423) ho an'ny Nova 2 Plus, izay, araka ny hitantsika, dia misy koa ny habaka fitehirizana anatiny.
Ny varotra mialoha dia efa natomboka ary dia hamidy amin'ny fomba ofisialy amin'ny 16 Jona ao Chinmankany Amin'izao fotoana izao, tsy misy antsipiriany bebe kokoa momba ny fisian'izany any amin'ny firenena hafa navoaka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Toy izany koa ny Huawei Nova 2 sy Nova 2 Plus vaovao
MOCR, mpamoaka horonantsary vaovao ho an'ny Android maimaimpoana izay ho tianao